China Slag yakatwasuka chigayo vagadziri uye vanotengesa | BBMG
Slag yakatwasuka chigayo yakashata mweya yekutsvaira mhando yekukuya michina, inozoomesa iyo slag nekukuya iyo slag.
Iyo slag pasi nekukuya roller pane yekugaya disc inoumbwa nezvikamu zviviri: chikamu chidiki cheSlag nyowani ine yakakwira mvura yezvinyorwa uye yakawanda yepasi isina-kupera slag ine yakaderera mvura zvemukati. Ichi chikamu cheasina-kupera slag ndicho chinhu chakakombama chakadzoserwa mushure mekuparadzaniswa nesevha nekuda kwemahombekombe akakura. Iyo yakasimba isina simba yekumanikidza mhepo yakakonzera zvikamu zviviri zve slag kuwira pane yekugaya disc.
Pasi pekuita kwesimba re centrifugal, iyo slag inotungamirwa kune yekubatsira kukuya roller, uye iyo slag inoumbanidzwa nekuderedza kufuridza kweanobatsira ekugeda roller. Yekubatsira yekugaya roller inochengeta imwe nhambwe kubva kukuya disc, uye yakagadzikwa paruoko rwe rocker ine uremu hwakareruka.
Iko huru yekugaya roller yakagadzika pane mukobvu mukuru wedombo ruoko, uye iyo yakagadzirirwa zvinhu dura inotsikwa nekumanikidzwa kukuya. Iko simba rinogadzirwa nehuremu hwekukuya roller pachako uye kumanikidzwa kweiyo hydraulic system.
Iko kukuya roller inotenderera nekusveta pamubhedha wehasha. Iyo sensor uye buffer muganho mudziyo wakaiswa paruware ruoko runogona kudzivirira yakananga simbi kusangana pakati pekugaya roller uye yekugeda disc.
Iyo ivhu slag zvidimbu zvinokandwa kunze nechisimba centrifugal uye kuyerera kuburikidza nekuchengetedza iringi. Pano inotorwa nekufema kwemhepo kuchikwira kuburikidza nemhete yemhepo, uye guruva nemweya zvinoyerera kuburikidza nekamuri yekugaya, zvekuti yakakomberedzwa neyakagadzika yekugaya humburumbira yakashongedzwa neinopfeka-isingagadzike lining uye inopinda muparadzanisi weupfu. Iyo yekuparadzanisa yeupfu yakaiswa kana kusunganidzwa pane yakatwasuka chigayo dhiramu.
Pasina rubatsiro rwekutapurirana kwekubatsira, chigayo chakamira chinogona kutakurwa zvakaringana uye ndokutanga nemota huru pasi pemamiriro ekurodha (mushure mekudzima pfupi). Kuti uburitse huru mota, iyo yekukuya roller iri hydraulically yakasimudzwa kudzikisa kumanikidza kweiyo hydraulic system. Oiri inogona kuunzwa mune isina rodless mhango ye hydraulic cylinder.
KUKUNDA DISC DIAMETER
Pashure: Kukuya roller
Zvadaro: Marasha akatwasuka chigayo
Slag yakatwasuka zvigayo